Oct. 9, 2020 Updated: Oct. 9, 2020 11:09 a.m.
1of6Marvin Sapp, pastor of The Chosen Vessel Cathedral, poses for a portrait in Fort Worth, Texas on Oct. 6, 2020 to promote his 12th album "Chosen Vessel." (Photo by Michael Mulvey/Invision/AP)Michael Mulvey/Michael Mulvey/Invision/APShow MoreShow Less
2of6Marvin Sapp, pastor of The Chosen Vessel Cathedral, poses for a portrait in Fort Worth, Texas on Oct. 6, 2020 to promote his 12th album "Chosen Vessel." (Photo by Michael Mulvey/Invision/AP)Michael Mulvey/Michael Mulvey/Invision/APShow MoreShow Less
3of6Marvin Sapp, pastor of The Chosen Vessel Cathedral, poses for a portrait in Fort Worth, Texas on Oct. 6, 2020 to promote his 12th album "Chosen Vessel." (Photo by Michael Mulvey/Invision/AP)Michael Mulvey/Michael Mulvey/Invision/APShow MoreShow Less
4of6Marvin Sapp, pastor of The Chosen Vessel Cathedral, poses for a portrait in Fort Worth, Texas on Oct. 6, 2020 to promote his 12th album "Chosen Vessel." (Photo by Michael Mulvey/Invision/AP)Michael Mulvey/Michael Mulvey/Invision/APShow MoreShow Less
5of6Marvin Sapp, pastor of The Chosen Vessel Cathedral, poses for a portrait in Fort Worth, Texas on Oct. 6, 2020 to promote his 12th album "Chosen Vessel." (Photo by Michael Mulvey/Invision/AP)Michael Mulvey/Michael Mulvey/Invision/APShow MoreShow Less
6of6Marvin Sapp, pastor of The Chosen Vessel Cathedral, poses for a portrait in Fort Worth, Texas on Oct. 6, 2020 to promote his 12th album "Chosen Vessel." (Photo by Michael Mulvey/Invision/AP)Michael Mulvey/Michael Mulvey/Invision/APShow MoreShow Less